A Complete Ngwọta n'ihi Olee otú iji ọcha gị MacBook Pro / iMac
Hichaa keyboard, ihuenyo, DVD Drive na Ọzọ na gị MacBook Pro
I nwere ike iji hichaa keyboard, ihuenyo, DVD mbanye, earphone Jack, USB Ports, na ndị ọzọ na gị MacBook Pro ọ bụrụ na ị na-eji ya ruo ogologo oge. Ị pụrụ ịhụ oké ájá bụ n'ebe nile. Otú ọ dị, ị dị nnọọ ike ozugbo iji otu nke mmiri ákwà na-arụ ọrụ mere, n'ihi na mmiri dobe na mmiri ákwà nwere ike ime ka gị MacBook Pro kwụsịnụ-arụ ọrụ. Na-esonụ, Atụmatụ na usoro e dere maka esi ọcha MacBook Pro / MacBook Air / iMac. Pịa akụkụ ị nwere mmasị na.
2. Clean MacBook Pro ihuenyo
3. Hichaa ọdịdị MacBook
4. Clean USB Ports on MacBook
Ọcha MacBook Pro Keyboard
Ya mere, unu mehiere site na-eri n'ihu gị MacBook na ama esịn nri gị ma ọ bụ onunu na ya. The nri ma ọ bụ ihe onunu niile bụ n'elu keyboard, ugbu a, ihe ị na-eme? Iji malite nhicha gị keyboard, mechie gị laptọọpụ-eme ka n'aka ike nkwụnye na-adịghị plugged n'ime ya. Akpa, jide n'aka na-a akọrọ towel na ngwa ngwa ehichapụkwa anya oriri ma ọ bụ ihe onunu anya nke gị keyboard. Ma, ọ bụ gị adịghị ngwa iji na-ehichapụkwa ọgbaghara na ugbu a gị keyboard bụ nnyapade. Nzọụkwụ nke abụọ na-eme iji bụ tufuo nke nnyapade keyboard site na-a akọrọ towel na itinye nwa mmanụ n'elu ya. Ugbu a, jiri nlezianya ehichapụkwa igodo na nwa mmanụ etinyere na akọrọ towel. Ekele, gị ugbu a nwere a ndị na-abụghị nnyapade ọcha keyboard!
Ọcha MacBook Pro ihuenyo
Nhicha gị MacBook ihuenyo dị mfe, dị ka ogologo oge ị na-nnọọ anya na otú ị na-eme ya. Ndị mbụ na ihe kacha mkpa bụ gbanyụọ gị na laptọọpụ ihuenyo-eme ka n'aka na ike nkwụnye na-adịghị plugged n'ime laptọọpụ. Nke a bụ iji mee ka n'aka na ọ dịghị eme gị ma ọ bụ laptọọpụ. Nzọụkwụ nke abụọ, na-a microfiber ákwà na-amalite na wepụ ọ bụla ájá na gị na ihuenyo. Ị na-achọghị itinye ukwuu mgbali ezie na. Ihe i nwere ike ime bụ jide gị laptọọpụ ihuenyo site na azụ na mgbe ahụ na-amalite nhicha na ihuenyo na microfiber ákwà. Ị na-achọghị jide ihuenyo n'onwe ya ma ọ ị ga-esi fingerprints na ya. Ozugbo ị na-mere nhicha ihuenyo, gị ugbu a nwere a dị ọcha MacBook ihuenyo! Ma, n'ihi na ndị nwere fingerprints na ha ihuenyo na wiping emeghị tufuo ya, ntụziaka a na-aga gị. Nzọụkwụ mbụ, gbanyụọ gị na laptọọpụ na ịkwụpụ ike nkwụnye. Nzọụkwụ nke abụọ, na-a microfiber ákwà na mmiri ọ bụ naanị obere. Adịghị sook gị towel na mmiri. Ị dị nnọọ mkpa mmiri otu n'ọnụ nke towel. Nzọụkwụ nke atọ, na-eji na mmiri n'ọnụ nke towel na-ehichapụ kwụsịrị fingerprints na ihuenyo. Ka ọ na akọrọ na mgbe ahụ ehichapụkwa gị na ihuenyo na akọrọ microfiber ákwà iji jide n'aka na gị MacBook ihuenyo dị ọcha.
Hichaa ọdịdị MacBook
Ọcha ọdịdị gị MacBook, i kwesịrị eso ndị a dị ka a gwara. Nzọụkwụ mbụ bụ gbanyụọ gị na laptọọpụ na ịkwụpụ ike nkwụnye. Nzọụkwụ nke abụọ, na-adụ ákwà nke ọ bụla ụdị na mmiri otu n'akụkụ ya. Ọ bụrụ na e nwere ihe ukwuu mmiri na towel, afanyekwa na ngafe mmiri nke ákwà ma mgbe ahụ, gị towel kwesịrị ooh. Nzọụkwụ nke atọ, jiri nlezianya ehichapụkwa gị MacBook ebe akụ na-atụ. Maka ndị na-ndị ọkà okwu na n'akụkụ, lezienụ anya maka na. Adịghị hichaa ya na ooh ákwà. Jiri a akọrọ ákwà maka ndị ọkà okwu.
Ọcha USB Ports on MacBook
Biko nlezianya na-agụ nzọụkwụ na-esi ọcha gị USB ọdụ ụgbọ mmiri na gị MacBook. Nke a bụ ihe dị mfe nzọụkwụ ma ị kwesịrị ịkpachara anya ka ọ ghara ime ihe ọ bụla nke na-adịghị gwara. Ị na-achọghị iji ụdị ọ bụla nke mmiri mmiri maka a na usoro. Nzọụkwụ mbụ, gbanyụọ gị na laptọọpụ na ịkwụpụ ike nkwụnye. Nzọụkwụ nke abụọ, ịzụta abịakọrọ ikuku. Nzọụkwụ nke atọ, ịgba n'ime nke gị USB ọdụ ụgbọ mmiri na abịakọrọ ikuku. Site na-eme na, ikuku ga-afụ na ájá n'ime gị USB ọdụ ụgbọ mmiri. Abịakọrọ ikuku bụ ihe kasị mma usoro on nhicha gị USB ọdụ ụgbọ mmiri. I nwekwara ike iji a owu swab dị ka nnọchi ma ọ bụrụ na ị na-adịghị ihe ọ bụla abịakọrọ ikuku na mpaghara gị ụlọ ahịa.
Ọcha earphone Jack
N'ihi na nhicha n'ime nke gị earphone Jack, ọ ga-abụ otu usoro ka i mere n'ihi nhicha gị USB ọdụ ụgbọ mmiri. Nzọụkwụ mbụ, gbanyụọ gị na laptọọpụ na ịkwụpụ ike nkwụnye. Nzọụkwụ nke abụọ, na-eji abịakọrọ ikuku ịfụ n'ime gị earphone Jack. Ájá, ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla, ga-ewepụ site abịakọrọ ikuku.
Ọcha DVD Drive
Otu usoro na ị na-eji maka abụọ n'elu ga-eji maka nhicha gị MacBook DVD mbanye. Nzọụkwụ mbụ, gbanyụọ gị na laptọọpụ na ịkwụpụ ike nkwụnye. Nzọụkwụ nke abụọ, jiri otu abịakọrọ ikuku ịfụ n'ime gị MacBook DVD mbanye ma hụ na ị na-etinye abịakọrọ ikuku ahịhịa n'ime DVD mbanye nke mere na ájá ga-ewepụ.
Hichaa n'ime unu MacBook Ọtụtụ mgbe, Ekwela ka ájá rụpụta n'ime.
ỊNARA anya mgbe nhicha unu MacBook. Ọ bụ ihe dị oké ọnụ laptọọpụ, na-adịghịkwa awaba IT.
Ị na-eji Ọ BỤLA mmiri mmiri maka ihicha n'ime unu USB ọdụ ụgbọ mmiri, earphone Jack, NA DVD DRIVE.
Adịghị ịgba MMIRI na gị keyboard ọcha IT.
Ị na-eji tutpik TO oyosio DUSTS si n'ime unu USB ọdụ ụgbọ mmiri, earphone Jack, NA DVD DRIVE!
CleanMyMac - Famous Ngwá Ọrụ ọcha Mac
> Resource> Mac> Olee otú iji ọcha gị MacBook Pro / MacBook Air / iMac